कथा : वान साइड लव – Rajmarg Online
कथा : वान साइड लव
गहभरी आँशु लिई सागर आफैमा बरबराई रहेको हुन्छ । खै दैवले के त्यस्तो नगर्नु गरेछन् । र जसले गर्दा आज आएर आफ्नो जीवनलाई धिक्कार्दैछ । बेडमा रहेको फोटो हेर्न थाल्छ र अतितका पाना पल्टाउन पुग्छ । जहाँ एउटा दलदलभित्र उसको सुन्दर संसार थियो ।मध्यम परिवारमा हुर्केको सागरमा कुनै कुराको कमी थिएन ।
हाँस्दै खेल्दै जीवनलाई पार गर्दै थियो कि अचानक उसको घर नजिकैमा कुनै नयाँ छिमेकको बसाइँसराई हुन पुग्छ । सागर कलेजबाट फर्किन्छ र घरमा आफू पास भएको खुशखबरी सुनाउँछ । यो सुनेर उसका परिवार हर्षित हुन पुग्छन् । तर अचानक सागर झस्कन्छ किनकी घरमा उसको परिवारबाहेक अरु सदस्यहरु पनि हुन्छन् तर सागरले नचिनेको कारण एकटकसँग उनीहरुतिर टोलाईरहन्छ ।
सागर एकटकसँग ती युवतीतिर हेर्न थाल्छ र मनमनै आहा कति उज्यालो अनुहार, कति लामो केश कुनै कुराको कमी नभएको सायद नै भगवानले स्वर्गकी परीलाई पृथ्वीमा उतारेछन् । यतिकैमा सागरको आमाको आगमन हुन्छ जसले गर्दा सागरको ध्यान भंग हुन्छ र उ केही नबोली त्यहाँबाट निस्कन्छ । हातमा एउटा पेन्सील कापी लिन्छ, अघि देखिको ती युवतीको आकृतिलाई कापीको पानामा उतार्न थाल्दछ । एकाएक ढोकामा टकटकको आवाजले उ झसँग हुन्छ ।
हत्त न पत्त कापी लुकाउँछ अनि ढोका खोल्छ । ढोका खुलेको मात्र के हुन्छ ऊ केही बोल्न नपाउँदै “हाई म प्रिया तपाईलाई मैले डिस्टर्व त गरिन” अकमकाउँदै सागर बोल्छ– हैन हैन केही होइन, म त यत्तिकै बसिरहेको थिएँ । बरु भित्रै आउनुहोस् न । उनीहरुबीच कुराकानी हुन थाल्छ । रमाइला रमाइला मीठा मिठा गफहरु हुन थाल्छन्, त्यत्तिकैमा तलबाट प्रिया जाने होइन भनि प्रियाको आमाले आवाज दिनुहुन्छ । ल म जान्छु है भन्दै प्रिया तल ओर्लिन्छिन् ।
बेलका कलेज बाट फर्किदै गर्दा सागरको नजर प्रिया माथी पर्न जान्छ ,शायद उनी केही किनमेल गर्दै थिइन । प्रियाले नदेख्ने गरी सागर एक कुनामा गई लुक्छ अनि प्रियालाई गुपचुप हेर्न थाल्छ ,मनमनै ’’ कति मिलेका दांत अनि त्यही माथी घायल पार्ने त्यो लजालु मुस्कान जसको निम्ति म सारा सँसारलाई जित्न सक्छु होला ,उनको त्यो स्पर्शरुपी कोमल शरीर अनि चिट्टिक्क परेको उनको जीउडाल लाग्छ उनलाई भगवानले मेरै निम्ति यो पृथ्वीमा पठाएको हुन ’’ । त्यतिकैमा कसैले उसको ध्यान भंग गर्दै चिम्टी लाउछ । ’’ अइया नि मार्यो भन्दै सागर पछाडी फर्किन साथ प्रियालाई देखेर झसंग झस्किन्छ ।
’’ के भयो सागर के सोच्दै बसेको छौ भनी प्रियाले प्रश्न गर्छिन , अक्क्मकाउदै सागरले जवाफ दिन्छ ’’ के केही होइन ,म त यतिकै…’’ । ’’ल हिंड घर जाउँ भन्दै प्रियाले सागरको हात समाउँदै तान्छिन ,प्रियाले यसरी हात नै समाएर हिंडेको देखेर सागर मख्ख पर्छ । क्षणभर मै दुवैजना घर पुग्छन ,’’ म अहिले जान्छु बेलका भेट ल मलाई ,तिमीलाई सरप्राइज दिनु छ ’’ ।
सागरको होस उडछ ,क्षणभर मै उसको सपना चकनाचुर हुन पुग्छ ,आँखा भरी आँसु ल्याउँदै फोटो हेर्छ अनि प्रियाको आँखामा हेर्दै बोल्छ ’’ तिम्रो रोजाई एकदम राम्रो छ मलाई मन पर्यो ’’ । सागरको कुरा सुनेर प्रिया खुसीले उफ्रीन थाल्छिन ’’ मलाई थाहा थियो मेरो मिल्ने साथीले यही नै भन्छ भनेर ,थ्यांक यु सो मच सागर ’’ ऊ बाहिर नै छ म बोलाउँछु हैं भन्दै ’’ राज आउ न भित्र भनी सम्बोधन गर्छिन ? ’’हुन्छ भन्दै आँखा बाट चुहिन थालेका आँसुहरु पुछ्दै पीडालाई आफू भित्र लुकाउँदै देखावटी मुस्कान दिन्छ ।
प्रियाले दुवैजनाको एकअर्का संग परिचय गराउँदै राजको हात समाउछिन’’। “अ साची सागर तिमीले दिएको पत्र मैले अहिले सम्म पढेकै छैन ,राजले राखेको पत्र मार्फत प्रेमप्रस्तावले मैले सबथोक भुलेछु त्यसैले तिमीले दिएको पत्र पढ्न नै पाएकी छैन’’ अनि सुन न राज मेरो एकदम मिल्ने साथी भनेको सागर नै हो’’ । राज हांस्दै सागर तिर हेर्छ अनि ’भेटेर खुसी लाग्यो ल अब हामी जान्छौ हैं भन्दै प्रियाको हात समाउछ, बाय भन्दै प्रिया अनि राज निस्किन्छन ।
दिनहरु बित्दै जान्छन ,प्रिया सागरको घर पुग्छिन अनि सागरको आमासँग ’’ सागर खोइ नि आन्टी ,धेरै भयो उनलाई मैले देखेकै छैन ..? खोइ नानी एकाएक हामीलाई केही नभनी कलेज जान छोड्यो अनि अहिले त बुवा संग नै ब्यापारमा लागेको छ ,पढ भन्दा मान्दैन अनि के भन्नु त नानी..! आन्टीको कुरा सुनेर प्रियालाई सागरमा आएको परिवर्तनलाई देखेर अचम्म लाग्छ अनि केही नसोची उतिखेर नै पसलमा पुग्छिन जहा सागर ग्राहकहरुलाई सामान बेच्दै थियो ।
सागरको नजिकै पुगी सोफामा बस्छिन’’ सागर के भयो तिमीलाई किन कलेज जान छाड्यौ..म संग पनि भेट्दैनौ आजभोलि…! सागर बडो नम्र भएर उत्तर दिन्छ’’ यहा बुवालाई सघाउने कोही नभएर मैले कलेज छोडेको हु अनि तिमीलाई पनि त यतिका दिन सम्म मेरो सम्झना आएन नि शायद राज भेटिएर होला होइन र प्रिया…! सागरको रुखो शब्दहरुले प्रियाको मन खिन्न हुन्छ अनि केही नबोली उनी त्यँहा बाट निस्किँछिन ,सागर पनि प्रिया संग गरेको आफ्नो अभद्र ब्यावहारले दुखी हुन्छ ।
धेरै सम्झाउँदै जादा अन्तमा प्रियाले सुकसुक गर्दै सागरलाई सबथोक बताउँछिन ,जून कुरा सुनेर सागर छांगा बाट खसे झै हुन्छ । प्रिया भने पुनस् रुन थाल्छिन अनि रुंदै बोल्छिन ’’ धेरै दिन भयो राज संग सम्पर्क छैन ,उसको फोन लाग्दैन र उसको घर कहां हो मलाई थाहा पनि छैन,अब यो पेटमा भएको नासोलाई लिएर म कहां जाउँ। को संग गुहार मांगु तिमी नै भन सागर…!
प्रियाको दयनीय कुरा सुनेर र उनको यस्तो अवस्था देखेर सागर गहिरो सोचमा पर्छ, कसरी प्रियालाई पीडा मुक्त बनाउ भनी सोच्न थाल्छ । प्रिया रुंदै’’ म मर्छु सागर ,मलाई बिष देउ अब म बांचेको कुनै सार छैन ,बेलैमा होस नपुर्याउदा आज मेरो यो दुर्ग्ति भएको छ’’…….।
काेइलाबास नाकाबाट अवैध भरूवा बन्दुकसहित विभिन्न हातहतियार बरामद